TaSae – ရှင်သန်ခြင်းဝိညာဉ် ကဗျာများ
TaSae	ရှင်သန်ခြင်းဝိညာဉ် ကဗျာများ
Diary ( poems from fb )
Translated ( English )
Memory of Desk’
ရှင်သန်ခြင်းဝိညာဉ် ကဗျာများ	​ထူးချွန်မည်ဆို ___ အထူးထွန်လေသည် ။ Format Sample .2WISH သခင်အတွက် အထူးထွန်လို . ငါလေ … တကယ့် ကျွန် . လူတွေထက် ထူးချွန်မည်ဆို . ငါလေ . မာန ကျွန် . ကံမုန်းမယ်ဆို . ငါ . အရှုံးပေးတယ် . ကြေနပ်ပါ ဦး . EVENT အလင်း အမှိန် အချိန်မှန်လုပ်ရင်း ဖြေးညင်းစွာ သယ်ထုတ် . ( လောကဟာ သူ့ အလုပ်သူလုပ်လို့) . အချိန်တို့ . . တိတ်ဆိတ်စွာ . မောင်းထုတ် ပစ်တယ် . – လရောင်ကို အဖော်ပြု… Read More
ပြန်ဝင်စားခြင်း (Format Sample )	Wishes သေခြာချင်တယ် စိတ်တစ်ခုကို ထုပ်ပိုး ငါပြန်စိုးမိုးမယ်ဆိုတာ . Event of expression နွေသရုပ်ဟာ ဦးခေါင်းထက်မှာ ခြေရှုပ်နေတယ် . နေမင်းကလဲ ခပ်ပြင်းပြင်း လင်းပေးနေရဲ့ / အတွေးတို့မှာ အတိတ်က ထိပ်ပုတ် ခေါင်းပုတ်နဲ့ . အရေးတို့ ဟာ အိပ်မှုံစုတ်ဖွား လမ်းသလားနေတော့ . နေပါစေ ___ . . Message တစေရင်မှာ . ကြယ် သာပြီးပြီ ခု ဘုရင် . ကြယ်ရင်ခွင် . ဝင်သာပါ့မည် . အလှဲ့ ကျ မနွဲ့ စတမ်း ။ the KING _______ . . Wishes သခွောခငျြတယျ စိတျတဈခုကို… Read More
စာပေ သိက္ခာ .( အမြင် အတွေး ဆောင်းပါး )	Format အသစ်တစ်ခု ပြုလုပ်ကြည့်တယ် . ကဗျာအတွက် ___ . Wish လို့ ခေါ်တဲ့ . ဆန္ဒကို ဦးတည် . Event လို့ခေါ်သော . အဖြစ်အပျက်သို့ _ ဖော်ပြချက် နှင့် ပေးချင်သော Message လို့ တိတ်ိကျကျ . သုံးပိုင်းချ၍ ရေးသားဟန် အသစ်ကို . အကြိုက်ခြင်း ထပ်တူကျမည်ဆို . သုံးကြည့်ပါဦး . ဘဝဟာ မောပမ်းပါတယ် . ရင်ပြင်တစ်ခုမှာ လွတ်လပ်စွာ အော်ဟစ်ခွင့် ရချင်သူတွေ ရှိမယ် . ရင်ခွင်တစ်ခုမှာ ခနတာ ခိုဝင်လိုသူလည်း ရှိမယ် . အော်ဟစ်ခွင့်ဆိုတာ လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး . လေထဲမှာသာ… Read More
ရေချိုးခြင်း	ကျောဘက် ___ . မျက် ရည်ကြောင့် ခြေချော်လဲဖူးသလို . ချော်လဲရင်း . ငိုခဲ့ဖူးလားလို့. အရေးမပါတာတွေ . အရာဖွဲ့ . အတွေးမှာ . အိမ်ခွဲရင်းနေခဲ့သူ မဟုတ်လား . . ဆပ်ပြာပူပေါင်းမှ . နန်းတော်ရာတွေ အခြေပြုတ်တာနဲ့နတ်ပြည်ကို လှမ်းတက်သွားလိုက်တာ . ဟဲ့ ___ . ပလုတ်တုတ် တဖျောက်ဖျောက်နဲ့ ပျောက် ___ . ပေါက်လို့။ the KING_______ ။ . ကြောဘကျ ___ . မကျြ ရညျကွောငျ့ ခွခြေျောလဲဖူးသလို . ခြျောလဲရငျး . ငိုခဲ့ဖူးလားလို့… Read More
Away from Home	Away from home,abird is on the grass, flying-forward on the past and branch-less breath are no for rest . I am rolling bird. Just leave me alone and ___ _______ take me to the home , it’s so-call home, so-called home. the KING .
Endeavor	ENDEAVOR I’m not an architect but love scripted me to perfect creature of appearinganew wisdom plaza from words . Once, I’ve been grimmer in my mind .Hello the King ! why you been laid for your life being affair of wife ? That I wished to claim. But now,abit realizing for,… Read More
ငါနှင့် . ငါ၏အကြောင်း . အတွေးအမြင် တကယ်တော့ ငါဟာ . ဘောင်တွေရဲ့ အပြင်ကိုထွက်လို့ . ဘောင်ငယ်တစ်ခုဖွဲ့နေထိုင်နေသူပါလား … ဟုတ်တယ် . အတွေးအခေါ်နှင့် စဉ်းစားခြင်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခြင်းတို့ ၌ ရှုထောင့်ပြောင်းကြည့်ခြင်း လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်ခြင်း . ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် . အချက်လက်ကို အခြေပြု ယုတ္တိဗေဒ ရှာယူခြင်းတို့ ဖြင့် အိမ်ဖွဲ့ တည်ဆောက်ယူထားသော … အတွေးသမား ဖြစ်သော်လည်း . လုပ်တတ် ကိုင်တတ် ဖြတ်လတ်သော သူ . လက်တွေ့ သမားပေါက်စ . ပေါ့ ။ ငါ သည်လည်း လူထဲက လူသားတစ်ဦး . အတွေးသာကွန့်မြူနိုင်ပေမယ့် အသိုင်းဝိုင်းနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု လူမှုဆောင်တာ . တာဝန်ဝတ္တရားတို့နှင့် ကင်းလွတ်၍ မရနိူင် . ဒီတော့… Read More
စက်ဝိုင်း … အချင်း၏ အတိုင်းအဆ . သူ့ ___ အဝန်းကို ခိုင်းနှိုင်းပြတယ် ၊ အချင်းများလှတဲ့ အခါ အလင်းအလျားက သာပါတယ် ၊ ငါသည် စက်ဝိုင်း အတွင်းကို ___. ထောက် အဝန်းကို ___. တောက်စေသော်ဝ် . the KING_______ ။ စကျဝိုငျး အခငျြး၏ အတိုငျးအဆ . သူ့___ အဝနျးကို ခိုငျးနှိုငျးပွတယျ ၊ အခငျြးမြားလှတဲ့ အခါ အလငျးအလြားက သာပါတယျ ၊ ငါသညျ စကျဝိုငျး အတှငျးကို ___. ထောကျ အဝနျးကို ___. တောကျစေ ။ the KING
မပြီးသေးသော . ပုစ္ဆာ ( ဘာသာရေး အထူးဆောင်းပါး )	အမေးတစ်ခု … နှတ်ကို စွန့် အသွားစေသော … မေးခွန်းဆိုလည်း မှားမည် မထင်. . အရှင့်ကို သိပလား . ရှာဖွေပြီးပလား လို့ … မကြာခန မေးမိတယ် . တခါတခါ တွေ့ တယ် . တခါခါကွယ်နေတတ်သား . တကယ်ဆို . နေရာတိုင်းမှာ ရှိနေပါတယ် . တကယ့်ကို ရှိနေပါလျက် မမြင်နိူင်သော . မြင်တွေ့ သမျှသည်လည်း ချစ်ခြင်းတရားတို့၏ အထွတ်အမြတ် . မေတ္တာ . ဂရုဏာ . ငဲ့ညှာ သနားမှုတွေချည်း . ပါလား ။ ဂုဏ်တော် . ၉၉ ခု ၏… Read More
နေနှင့် နေမင်း . . ဝေးလွန်းသော . နေမင်းဟာ ကြယ်တစ်စင်းပါပဲ ၊ . . ငါသည်လည်း သာနေတဲ့ နေမင်း အလင်းအား မတူပေမယ့်. အတွင်းသားတော့တူပါတယ် လအရောင်ကိုလည်း ကူ ပါတယ် . ညအမှောင်ကိုလည်း ဖြူ ပါတယ် . ကမ္ဘာ တရက်ခြား မျက်နှာမူလည်း ငါသာ အမှတ်မထား . ပူပါတယ် … the KING._________________။ နနှေငျ့ နမေငျး . ဝေးလှနျးသော . နမေငျးဟာ ကွယျတဈစငျးပါပဲ ၊ . . ငါသညျလညျး သာနတေဲ့ နမေငျး အလငျးအား မတူပမေယျ့… Read More
ငါ … ဘုရင် . ငါ ဘုရင် … ကောင်းကင်က အနီမှာ . . ကြယ်တွေ မပီပြင် တိမ်တွေ မာယာ ဆင်ထားတယ်လို့. ပစ်ဖောက်လိုက်သည့်မီးကျည် ကို လမ်းလွှဲ အပြာရောင်မီးတန်းတွေ . ပင်လယ်ပေါ် . အလွမ်းကြဲ ခဲ့ပေါ့ … . သေခြာပါတယ် . တည်နေရာရောက်ရင် . ငါ ပြန်လျောက်ဦးမှာ – မိဘုရားဟာ ငါ့ ကြင်ယာမဟုတ်ဘူး . ဘုရင်မ၏ . သခင် . ငါ … ဘုရင် ။ The KING. __________________ ငါ ဘုရငျ … . ကောငျးကငျက အနီမှာ… Read More
ပန်းရဲ့အနမ်း (သို့) တစေဇာတ်သိမ်း အချစ်တစ်ခုမှ လွဲ၍ . အခြား အပြည့် မမှီနိူင်သော ငါ အားနာပါတယ် သူ့ အတွက် – မှင် အဖြူ နှင့် ကလောင်တစ်ချက် လမ်းတဝက်မှာ ကွယ်ပျောက်သွားဖို့. အလွမ်းတို့ လွင့်တက်မလာတော့ဘူး . . လမ်းတစ်ဝက်မှာ ချိုးကွေ့အနမ်းတို့ပျိုး ဖို့ မေ့ခဲ့ပြီ … ပန်းရေ ။ တစေ .( Last )The TaSae is over . Sorry ! _____________________ . အခဈြတဈခုမှ လှဲ၍ . အခွား အပွညျ့ မမှီနိူငျသော ငါ … Read More
” Welcome to T@Sae “
T@Sae’s Desk Hot hits	ငါနှင့် . ငါ၏အကြောင်း . အတွေးအမြင် မပြီးသေးသော . ပုစ္ဆာ ( ဘာသာရေး အထူးဆောင်းပါး )	ပန်းရိုင်း	ချစ်သူ . သိစေ ...	TaSae's Millestones စက်ဝိုင်း ... ငရဲ သား ငါ ... ဘုရင် . နေနှင့် နေမင်း . Createawebsite or blog at WordPress.com